Miaraka amin'ny AMD nihaona indray izahay | Avy amin'ny Linux
Rehefa nieritreritra aho fa tsy afaka namely ny farany ambany, rehefa avy nivarotra ny malalako Nvidia, dia nanapa-kevitra ny hivarotra ny malalako Intel i5 aho, satria amin'ny Linux dia tsy afaka nilalao tsara an'ireo lalao vaovao aho (raha ampitahaina amin'ny Windows).
Ka nohamafisiko ny tenako, satria maro ireo mpampiasa Phoronix no nanolotra vahaolana AMD tamiko. Mahantra aho izay nieritreritra fa nisy niova hatramin'ny volana Jona 2012… saingy tsia, tsy misy, tsy nisy niova mihitsy, ny zavatra rehetra dia mijanona ho iray ihany.
Manomboka amin'ny fitsapana aho Ubuntu 13.04 miaraka amin'ny apu a8 5600k (radeon 7560d), hitako fa miadana loatra ny mpamily maimaim-poana, ny flash tsy azoko apetraka amin'ny efijery feno satria miadana ny pc, ary avy eo manandrana manavao ny kernel ho 3.11 aho (izay manana fitantanana herinaratra mavitrika). Ampiasao xorg edgers raha manana ny git farany an'ny mpamily amd sy ny latabatra farany, avereno, ampodino ny fitantanana herinaratra, fa ny zava-drehetra kosa dia mijanona ho mitovy, miadana toy ny emule tamin'ny taona 1999 ny mpandefa (raha efa noforonina ...), ary tsara kokoa andao tsy hiresaka momba ny stationery.
Manandrana mitady fandriam-pahalemana, soloiko ilay mpamily maimaim-poana amin'ilay irery, mahantra aho, hoy izy tamiko! Ratsy kokoa tsy afaka mandeha! Azo antoka fa efa namboarina ireo bibikely nampandrenesiko tamin'ny taon-dasa, napetrako ny mpamily tompony ary hitako fa nandrovitra tamin'ny famokarana horonantsary aho ary nandeha tselatra, nankany amin'ny AMDCC aho, nanetsika ny ranomaso, nametraka sary mihetsika aho ary toa ireny ... , ny zavatra rehetra dia tsy miova…
Noho izany, maka ny solosainako aho ary manomboka mitady distro hafa, aorian'ny adiny 2 mieritreritra izay distro hampiasako, tsy mahita izay nahafa-po ahy, izay ivelan'ny boaty, manapa-kevitra ny hisintona aho Archlinux, Manomboka ny fametrahana aho, apetrako KDE, miandry inona Kwin nilamina kokoa izy io, ary mampiasa ny tahiry VioLO aho hahazoana ireo Catalista farany.
Manandrana aho, mamono ilay Ksy vsync aho ary mampihetsika ilay AMDCC (tsy mandeha mihitsy ilay Kwin). Farany manandrana mijery flash aho ..., miadana ... miadana be, ary mihinana cpu kely aza, dia tsikaritra satria tsy nihoatra ny 20 fps tsiranoka (raha tsy diso aho dia notifirina tamin'ny 23/24 fps ny sarimihetsika), mba ho tsikaritrareo isaky ny 4/5 segondra.
Miteny amin'ny tenako aho! Ity dia flash .., andao hanandrana zavatra ara-dalàna kokoa, mandray VLC aho, milalao anime 1080p antsoina hoe Break Blade, manandrana ary mahita ny fomba xv Tsy misy mandeha milamina, tsy misy miova, mitovy amin'ny jerky amin'ny seho haingana io, toy ny tamin'ny volana jona 2012, fony mbola nampiasa ny radeon 4650 aho, ka manapa-kevitra ny hitsapa ny vokatra gl, Manandrana amin'ny Mplayer sy VLC aho, ny tsiranoka rehetra, atodiko mankany amin'ny bara minitra ny taranja hijerena, ary ilay bug izay nitaterako azy tamin'ny volana Janoary 2012, dia mbola eo ihany .., rehefa ampodiko amin'ny bara minitra sy ny habetsaky ny kursor , OpenGL lasa adala ary mamorona artifact manerana ny efijery….
Lany ny faharetako ary izao aho manoratra Windows, manantena aho fa hanome vola ahy ny razamben'andriamanitra amin'ny volana oktobra hividianana ahy a NVidia...
Aza mividy AMD!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Miaraka amin'ny AMD izahay dia nihaona indray
107 hevitra, avelao ny anao
Mamaky anao aho ary mitovy foana. Raha fantatrao fa ny karatra azonao dia tsy mandeha tsara aminao ao amin'ny GNU / Linux, maninona no esory ny Windows? Eo am-piasana aho dia mampiasa PC izay avy amin'ny orinasa i Windows ary tsy nesoriko izany. Nametraka an'i Debian aho ary manana boot roa. Fa maninona? Eny, satria rehefa te hilalao aho dia miditra Windows ary dia izay. Tapitra ny lohahevitra.
Tsy mbola nametraka Windows nandritra ny 2 taona teo ho eo aho, milalao fotsiny amin'ny Linux, lalao teratany (izay tena tsara ary maro kokoa no mivoaka) ... Mbola tsy hitako izay antony tokony hampiasa Windows hataoko. efa azoko atao amin'ny Linux.
Raha tsy mety aminao io dia tsy mety aminao.
Aza dorana aho, fantatro fa hankahala ahy i Pandev noho ity fanehoan-kevitra ity, fa ho fankalazana ny fahatokisan-tena ananantsika ary ny fahatsapako hamaky ny baoliny:
Satria mainty ... XD
Matotra fa mampihomehy ¬¬
Fomba fanavakavahana ON! 😀
Milalao lalao izay tsy misy tompon-tany any Gnu usa
Avy ny orana haters ao amin'ny 3… 2… 1… Tsy ratsy ny AMD, tsy raha mampiasa azy ivelan'ny Linux ianao.
"Izay mamoaka ny mpamiliny, ny masontsivana azy, tsara, tsaraaaaa", manaisotra ahy izy io, tsy mandeha tsara izy ireo, izany no antony namelako azy ireo taona maro lasa izay tamin'ny ambaratonga sary ary tazomiko ny Nvidia GT430, tsy biby goavambe fa izaho afaka milalao, afaka mijery horonantsary, afaka manao izay tadiaviko nefa tsy mandalo fahasahiranana amin'ny Linux
Marina ny anao @nano, tsara ny ATI ivelan'ny Linux, satria raha mampiasa Linux ianao ary manana ATI dia tsy dia tsara ho anao izany, mahamenatra satria ny carte de graphier amin'ny tranga maro dia mihoatra an'i NVIDIA (ary ny mifanohitra amin'izay koa no mitranga).
Hitahiry ny NVIDIA aho ary tsy ho ela dia hihazona ny Intel HD Graphics amin'ny Core i3 😀
Layer 8 🙂
Tena mieritreritra ianao fa sosona 8. Tsy isalasalako fa, tena marina.
Ireo troll ireo ihany no nahatonga ahy nianjera tao amin'ny phoronix ary mazava ho azy fa 80 tapitrisa euro ny apu, ny tolotra avy amin'i amazona ahahhaa dia tsy azo resena xD.
Amd dia mamoaka ny masontsivana ohh yeah 8D
Hafahafa ihany ny olanareo, nofinofy aho kahie misy apu E450 izay itondrako an'i Debian fitsapana Xfce amin'ireo mpamily tompona trano ary tsy asehoko ny iray amin'ireo olana tondroinao, afa-tsy ny fisehoana miadana amin'ny flash ao amin'ny 720p , fa lafarinina sakaosy iray hafa io. Mahatsiaro ahy fa mety ho zavatra "mifanaraka" amin'i KDE izany.
@JackassBQ izany no tranga misy anao, fa ny "olana" amin'ny fampisehoana flash miadana amin'ny 720p miaraka amin'ireo mpamily ATI tompony anananao, dia tsy misy antony, ary ny valiny dia tsotra dia tsotra, miaraka amin'ny NVIDIA mampiasa nouveau na mpamily tompona vola izay tsy nisy izany ary dia ny olana goavana atrehin'ny ATI / AMD amin'ireo mpamily azy sy ny kalitaony tsy dia tsara, izay amin'ny farany mahatonga azy ireo ho safidy ratsy dia ratsy tokoa rehefa mampiasa azy ireo amin'ny GNU / Linux.
Manome toky anao aho fa tsy araka ny nolazainao, nanao fitsapana tamin'ny intel sy nvidia miaraka amin'ny fitaovana mitovy amiko aho ary ny olana amin'ny flash dia mitovy. Fantatry ny rehetra fa mitsoka ny GNU / Linux, izany no olana.
Raha izany amiko dia afaka mahita tselatra amin'ny 720p sy 1080p miaraka amin'ny nouveau tsy misy olana avy amin'ny YouTube aho, ka toa hitako fa manao jeneraly ianao. Amin'ny tranga Intel, tsara ny HD Graphics ary tsy manana olana amin'izy ireo aho, ary manantena aho fa tsy hanana azy ireo amin'ny pc vaovao.
mafana be eo amin'ny karatra ny nouveau ahy… noho izany mila mampiasa ireo manana aho
Ry namako, ny solosaina rehetra dia tsy mitovy amin'ny iray hafa, na dia hadware mitovy 2 aza amin'ny famaritana 😉 avy amin'ny zavatra nolazaiko taminao, nandany taona maro nanamboarana sy nijery solosaina aho, nanatsoaka ny fehin-kevitro aho ary ilay layer 8 dia tena ampiasaina sy ivelan'ny lamaody, misy maodely amd amin'ny sary milay amin'ny linux toy ny hafa izay tsy ataonao miandoha na miraikitra xD, amin'izao fotoana izao no hany orinasa hitako nametraka ny mpamily sary maimaimpoana ho azy ireo dia ny an'ny intel, na dia tsy hisy ny tsy fahampiana amin'ireo karazana tian'izy ireo atomboka Ny ady amin'ny afo, andao lazaina ny zavatra misy azy ireo, samy amd sy nvidia dia tsy afaka mamoaka ny kaody loharano hametrahana izany amin'ny linux, vitsy ny elanelana ary ny zavatra mahatsikaiky indrindra rehefa mandeha ny fotoana. izy ireo dia hanana lova, ary tsy misy amin'ireo 2 no mahavita manao zavatra mendrika samirery, ny zavatra hafa dia ny mamadika injeniera ny mpamily ary mananaware ary mahazo mpamily tsy ofisialy fa mendrika: /
Salama! 🙂 (Ampiasao na dia Intel aza na dia tsy tianao be aza, io ihany no safidy azo atao mandra-pahatonganao hanao ny asanao tsara fa tsy antsasaky ...)
chucha xD dia ho an'ny fanehoan-kevitra @jackass xd
Manaiky tanteraka. Betsaka no mino fa ny mpamily tompony, noho io antony io indrindra, no tsara kokoa, raha ny tena izy dia ny miadana ny solosaina. Tsy nanana olana tamin'ny Ubuntu taloha aho, ary rehefa nanomboka niseho izy ireo (kinova 12) dia niova ho LMDE aho ary nivaha ilay raharaha.
Manome toky anao aho fa nanandrana nvidia gt630 sy intel hd4000 aho, ary 0 ny olana amin'ny flash, miaraka amin'ny intel ny olana tokana dia ny hoe amin'ny toerana faharoa dia nandriatra na tsia izy io, saingy samy nilamina be izy roa.
Ka angamba lesoka 8 an'ny ahy ny tsy fahaizanao mampiasa sary intel na nvidia amin'ny fomba tsara, ary ny layer 8 aminareo tsy afaka mampiasa AMD araka ny tokony ho izy 😀
Izay no hevitrao zanaka xDDDD.
Raha mahafaly anao izany: ok
Mieritreritra aho fa manelingelina be anao amin'ny sosona 8 ianao, raha izany dia tsy afaka milaza aminao fotsiny aho hoe mieritreritra izay tadiavinao.
Eny, rehefa mianatra manamboatra tsara ny fitaovany izy ireo dia hiresaka isika 😉
Eny ary, hampahafantatra anao izahay, fiarahabana ary mirary soa.
Efa nomenao ahy ny antony hamahana ny olanao, ahoana no hahaizanao azy. Salama.
Miaraka amin'ny i3 an'ny taranaka voalohany sy ny Intel HD dia manana olana amin'ny flash ihany koa aho, indrindra amin'ny efijery feno.
PS: Tsy ilaina ny maneso, samy manana ny traikefany amin'ny fitaovany izy ireo ary iza no mahalala raha iray ny olana na ilay fitaovana manokana.
HTML5 ary vita ny tantara
Misaotra amin'ny torohevitra. Ny fitsiriritana izay maloto amin'ny mpamiliny maimaimpoana dia miasa tsara ary mikarakara tsara ny mpamily tompony.
Miankina amin'ny NVIDIA izany, manana vehivavy antitra aho (8400 GS) ary salama tsara izy, miaraka amin'ny mari-pana ambany amin'ny 48ºC sy 60ºC amin'ny heriny feno, milalao zavatra iray hafa aho, ary tsy ho ela ny motera PuerVideo HD dia azo ampiasaina amin'ny nouveau, na dia mazava ho azy aza fa Tsy hampitahaina amin'ny mpamily fananana izy io, manidina any ny zavatra.
Manana AMD A10-5800K APU miaraka amin'i Radeon (tm) HD Graphics 7660D aho ary tena mandaitra… jereo tsara ary zahao izay tsy hita .. ohatra: manana chanel roa ianao. ohatrinona ny ondrilahy? sns
eny ny tadiavinao dia ny linux mba ho marina amin'ny windows dia ao an-tsainao ny olana fa tsy amin'ny gnulinux
tsia dia hoy izy:
Ny fitadiavana zavatra izay nanambazam-bola be dia be mba hiasa tsara na, farafaharatsiny, ny antonony tsara dia tsy olana ara-tsaina, madio ara-dalàna izany.
Valio i nop
ram 1333 mhz ddr3, navitrika daholo ny zava-drehetra, ampahatsiahiviko 512 mb ho an'ny apu, tsy resaka configurement io, mitovy ny tantara hatrizay, ratsy ny mpamily amd amin'ny 2d ..., omaly nifampidinika tsara aho izany amin'ny phoronix. izay miaraka amin'ireo mpamily 13.8 nivoaka omaly farafaharatsiny mba tsy ratsy loatra ny lalao, ny valizy, fa ny 13.7 izay azoko omaly, mahatsiravina… .: /. Ary fantatro fa tsy tranga hafahafa ity, satria ny olana momba ny fivoahan'ny opengl miaraka amin'ny vlc sy mplayer dia efa notaterina rehefa nampiasa ny radeon 4650 ary mbola eo io. Mba hanatsarana ny raharaha amin'ity faran'ny herinandro ity dia hanao horonantsary iray mampiseho ny olana aho.
Ho an'i elav, satria tsy hividy amd aho, raha mila vola aho ary ny Intel intel dia tsy miadana toy ny CPU, fa manana sary intel hd3 / 2500 saika tsy mendrika hilalaovana amin'ny windows.
ho an'ny APUs RAM dia tadidio matetika fa ilaina kokoa, mampandeha tsara kokoa ny pc, zavatra tamin'ny 1866 na 2000+
angamba ny olana dia ny fampidirana sary ho an'ny APU, azonao atao ihany koa ny mampiasa FX miaraka amina sary tsy mitovy HD 7000 andiany midadasika ambany
Io ondrilahy io ihany no nampiasako ho an'ny intel hd4000, mazava ho azy fa raha mametraka haingana kokoa ianao dia ho hitanao ny tsy fitovizany, fa noho izany dia tsy tokony hanana ireo bibikely mega ireo ny mpamily.
Ary i Intel dia manana 1600mhz farafahakeliny ho an'ny RAM (ao amin'ny processeur), amin'ny AMD dia hatramin'ny 1866mhz izany amiko, ary hitako tamin'ny OC mihoatra ny 2000, saingy indrindra ho an'ny APU izany satria mihazakazaka tsara kokoa izy ireo manana ny RAM izay no nahatonga azy nilaza hoe xd.
Lahatsoratra mahaliana. Tsy milalao lalao aho, farafaharatsiny tsy ireo be pitsiny manana fampiasa amin'ny fitaovana avo lenta. Mampiasa Linux aho amin'ny zava-drehetra ary amin'ny fanandramana Debian 64 XFCE4 miaraka amin'ny Intel G31 / 33 maotina ao an-tsambo dia manana ampy aho.
Hovako ny add-on firefox ho an'ny mpandraharaha mpampiasa ..
Ao amin'ny archlinux, ny mpamily ATI tompony no ratsy indrindra eto an-tany, ary vao mainka aza raha mampiasa ireo violo ianao dia tsara kokoa ny misintona iray ary hamboarina amin'ny tanana (raha sanatria te hampiasa ireo manana ianao)
Mampiasa ATI HD3000 aho, ny mpamily maimaimpoana no tsara indrindra amin'ireo apus lova ireo, saingy mila ampiendrehoo izany mba hahitanao faran'izay tsara indrindra, mamporisika anao aho hamaky ny wiki archlinux radeon https://wiki.archlinux.org/index.php/Radeon#Performance_tuning
Ary tadidio ihany koa fa ny Archlinux dia tsy tonga na inona na inona amin'ny alàlan'ny default, eny fa na dia ireo tranomboky hafainganam-pandehan-tsary aza:
lib32-fontconfig lib32-libxcursor lib32-libxrandr lib32-libxdamage lib32-libxi lib32-gettext lib32-glu lib32-libsm libxi gettext glu libsm desktop-file-utils lib32-giflib libpng lib32-libpng gnutls lib32-gnutls libxinerama libxcomposite -libxcomposite libxmu lib32-libxmu libxxf32vm lib32-libxxf86vm libxml32 lib86-libxml2 libldap lib32-libldap lcms lib2-lcms mpg32l ib32-mpg123 openal lib32-openal v123l-utils lib32-v4l-libils alsaid libil-libil al-libos latabatra lib32-latabatra
Ary toy izany koa apetraka eto ny tranomboky rehetra https://wiki.archlinux.org/index.php/Steam/Game-specific_troubleshooting#Dependencies
Ho an'ny karatra lova! ny mpamily maimaim-poana no tsara indrindra hatramin'ny nolefa, fa manomboka amin'ny andiany 5xxx dia mbola tsy voadio tanteraka mhhh ...
Gaius baltar dia hoy izy:
Nojereko imbetsaka tao anaty sakafoko izany ... Ny AMD dia tsara amin'ny resaka vidiny, fa amin'ny fampisehoana (ary betsaka kokoa amin'ny Linux) dia tsy manonitra izany. Araka ny nolazaiko tamin'ny lahatsoratro teo aloha, tsy ny resaka fampisehoana amin'ny lalao intsony (izay hatsaraina), fa ny olana amin'ny birao amin'ny ankapobeny.
Narotsako ny Nvidia 9800GT andro vitsy lasa izay, ary ny fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana dia tena miharihary, farafaharatsiny miaraka amin'ireo mpamily tompony. Ity karatra ity dia azo raisina amin'ny vidiny lafo dia tsara, raha jerena ny fampisehoana omeny. Nandefa rohy iray avy tao amin'ny Phoronix aho tamin'ny andro hafa niaraka tamin'ny benchmark Linux / windows tsara ho an'i Nvidias hatramin'ny 98'00GTX mankany ambony.
Valiny tamin'i Gaius Baltar
Ho an'ny firaketana dia nihatsara be ny Catalyst for Linux. Roa taona lasa izay, ny fampiasana ny laptop HD4330 ao amin'ny OpenSuse / Kde ary i Ubuntu dia andriamanitra ... miaraka amin'i Debian dia nihatsara kely kokoa.
Nihatsara be izy ireo raha ny amin'ny andiany 11.xx fa ny 12.6 izay farany nanohana ny radeon 4650 .., tsia, tsy ... nataon'izy ireo aho rehefa nitory ireo bug! Heveriko fa ny kely indrindra tokony hataon'ny orinasa toy ny amd dia ny fampandehanana tsara ny mpamily amin'ny kwin na compiz, ary ny xv dia tsy mandeha toy izay antsasaky ny antsasaky ny nvidia na intel.
Heveriko fa ny olana dia miharihary tamin'ny mpampiasa taona vitsy lasa izay, saingy izao fa tonga ny lalao mahery vaika, ny zavatra fantatsika rehetra dia nanomboka nihanazava: fa ny mpamily ATI ho an'ny Linux dia 'diky'. Heveriko fa afaka roa taona dia hihatsara izany ... na ATI na Nvidia. Fa amin'izao fotoana izao, isika izay manana sary "antitra" dia mazava momba izany. 😀
Vao omaly aho dia nanana zavatra niainana toy izany tamin'ny HD5670, izay mazava ho azy fa tsara amin'ny Windows. Rehefa avy nanova ny kapila mafy aho dia naleoko nametraka ny zava-drehetra avy hatrany am-boalohany, ary omaly dia Linux Mint 15 Kanelina.
- Vao napetraka dia manome ahy ireo mpamily maimaim-poana, miaraka amina olana ny mamantatra tsara ny vahaolana fa hamaha azy haingana aho.
- Mametraka 'fglrx' aho ary aorian'ny famerenako ny Cinnamon peta ary miditra amin'ny fomba lova na izay iantsoana azy.
- Mametraka 'fglrx-fanavaozana' aho, izay vao haingana kokoa, ary mitovy kokoa (io fehezanteny io toa haiko tsara).
Navelako maimaimpoana ireo mpamily, izay toa tsy nety raha tsy nametraka lalao maromaro aho. Ny lincity-ng ihany no notadiaviko ary tsy saika hitety ireo menus-ny aho dia tonga amin'ny birao.
Rahampitso dia hanohy ny fitsapana aho.
Mahagaga fa amin'ity solosaina finday misy HD7470 ity dia mandeha tsara amin'ny 'fglrx-fanavaozana' (na dia mieritreritra zavatra tadidiko aza aho miaraka amin'ny horonantsary feno), fa eto kosa dia mampiasa Mate aho, izay tsy mitaky firoboroboan'i Kanelina sy birao hafa misy fototra maoderina kokoa.
efa nanandrana ny ranomasina ny apu a8 5600k ve ianao?
aza kivy ...
Miaraka amin'ny tabilao asrock, nampavitrika ny Xboost aho, ka hitako fa xD dia oceada ..., izao aho hanandrana amin'ny iso ubuntu 13.10 ary avy eo amin'ny distro izay mampiasa tontolo iainana tsy misy vokany, toy ny crunchbang, hatramin'ny satroka mena XD
Mitandrema! Ny AMD mihitsy no mampitandrina fa ny Ubuntu 12.04 ihany no tohanan'izy ireo ... na dia mbola mihetsika aza aho ary miresaka momba ny Catalyst Legacy, izay ananako ho an'ny HD4330.
Amin'izao fotoana izao dia mizaha toetra amin'ny kubuntu 13.10 aho ary toa tonga lafatra, sady tsy misy rovitra ny tselatra ary mihetsika satria ny mplayer dia afaka mampiasa opengl tsara ary tsy misy olana, satria amin'ny 2d dia marina ny zava-drehetra .., izao ny ahiako dia ny maripana. ., lm- sensor tsy milaza amiko hoe firy ny degre ananako.
Mandra-pahatonganao nahavita azy. Izany no maha-zava-dehibe ny mandreraka ny fomba rehetra alohan'ny hirodana satria eny. Miarahaba, miarahaba anao aho 😉
Nahatratra antsasaky ny fanatontosako azy io, isaky ny adiny 1 na 2, toy ny fianjeranan'ny gpu ary vonoina mandritra ny 5 segaondra ny efijery ary avy eo hiverina ihany izy. XD
Misy ireo distro izay mitondra tena toy ny poop (tsy lazaiko hoe, raha ny marina, ny debian sy ny openuse ary ny mint ihany no mitondra tena araka ny itiavako azy: P)
Azafady mba manavao ny lahatsoratrao / tantrum
Ratsy noho ny anao ny solosainako
AMD X3 450 + ATI HD 4250 amin'ny 720p amin'ny ASUS efa ho 24 ″ 1080p
Ary miaraka amin'i Manjaro sy mpamily maimaimpoana dia mandeha avokoa ny zava-drehetra - afa-tsy Blender izay tsy ampiasaiko hatramin'ny ATI mampiasa OPENcl - misokatra - fa tsy CUDA - mihidy -
Tsy mila bebe kokoa aho ary tamin'ny androny dia ny tahan'ny kalitao / vidiny no tsara indrindra
Ny APU dia tsy tokony hanao zava-mahatalanjona, fa ny manana tahiry kely indrindra
Manelingelina ahy ny fandaozana ireo mpanara-maso izay manao ny marika rehetra
Amin'ny GPUs, ny kalitaon'ny vidin'ny ATI - NVIDIA dia mifandanja ary ny mpanara-maso sy ny CUDA dia manana tombony amin'ny maodelin'ny vidin'ny Nvidia sy ny fahombiazany mitovy amin'ny an'ny ATI, fa amin'ny APU kosa ny fampitahana dia tsy maintsy atao amin'ny Intel amin'ny vidiny sy ny fahombiazany ary amin'ny vidiny. fa ny CPU dia mandresy amin'ny ATI, ary amin'ny vidiny sy ny fahombiazany ho an'ny GPU ihany koa.
Apetraho ny solon'ny Intel miaraka amin'ny sary Intel ho an'ny vidiny mitovy raha oharina, fa tsy ny fangaro hypothètical Intel + mora vidy nvidia tsy misy.
Ny solosainako miaraka amin'ireo mpamily maimaim-poana sy ny radeon 4650, dia tonga amin'ny degre 90, noho izany tsy mikasa ny hanavao na inona na inona aho. Na izany na tsy izany dia hasehoko izay fanjakana mampihomehy misy ny mpamily ho an'ny karatro. Fa rahampitso angamba izany.
Wayne7 dia hoy izy:
Compa Maniry azy aho mba hahita ny vintana rehetra, mieritreritra aho fa manana famosaviana / ozona aminy izy haha-sangisangy fotsiny.
Izaho dia niaraka amd apu A8-3850 efa ela izao, ary toa anao dia nahasarika ny masoko tanteraka ny vidiny. Efa nanandrana distro maro aho ary niova, saingy tsy noho ny fitoniana, fa noho ny fitiavako, fa ireo olana tsy fandriam-pahalemana ireo dia tsy mahazo ahy, fa ny fampisehoana dia tsy mitovy amin'ny ao amin'ny Windows manodidina ny lalao, ireo mihinana divay dia tena ratsy Ankoatr'izay, ny Chakra-ko dia tsy miorina amin'ny mpamily maimaimpoana; Hamafisiko ihany fa ny flash ao amin'ny Firefox dia zavatra mahatsiravina izay ao amin'ny Chromium dia tsy mitovy izy io, mirentirenty.
Manana dualboot aho izao, ary windows ho an'ny lalao. Saingy fantatro fa ireo mpamily tsy miankina amin'ny amd dia lavitra lavitra amin'ny haavon'ny nvidia.
Valiny tamin'i Wayne7
Ny apu anao dia zokiko noho ny ahy, mampiasa hd65xxd izay mitovy amin'ny andiany 5xxx izy ka manana fanohanana tsara kokoa :). Ny olako 2d dia vita tamin'ny kubuntu 13.10… avelao aho hanao fitsapana vitsivitsy.
Any CHAKRA dia lavorary daholo ny zava-drehetra
Izany no antony ampiasanao ny windows (trolling faratampony).
Tsotra toy izany (ho ahy) fa tsy gamer aho, raha milalao dia ataoko amin'ireo tonga tampoka ao amin'ny rafitra (raha miaraka aminy), tsy misy toa ny mandany fotoana milalao an'i Sudoku na Mahjong (ilay farany aho nihaona / nianatra Misaotra izay tonga tao Ubuntu) teo am-panavaozana ny rafitra na fisintomana zavatra.
Ary raha milalao aho dia ataoko amin'ny lalao 2, tsy misy toa ny fanamby PES tsara miaraka amin'ny namako, miaraka amina labiera vitsivitsy, na dia saika very foana aza aho.
Ny PS2 dia tsy manana ny lalao tsara indrindra manerantany: Serious Sam xDDD
Ao amin'ny Linux izay lalao dia hyper mega tsy voatsara loatra, mahamenatra: /
Nampiasa ati aho nandritra ny 10 taona izao, manana 5670hd aho miaraka amin'ireo mpamily debian sy propriétre ary tsy manana olana na flash na horonan-tsary aho, hilalao any raha mampiasa windows, afa-tsy rehefa milalao FTL izay tiako aho. raha fintinina dia miresaka momba ny fomba fanaony ao amin'ny foara ny rehetra.
araka ny nolazaiko teo aloha fa tsara kokoa ny hardware AMD RADEON noho ny Nvidia fa ny NVIDIA dia manana rindrambaiko tsara kokoa noho ny AMD. Mpankafy ny AMD aho fa mandra-pivoahan'ny drive zavatra tsara ao amin'ny Linux dia hanohy hampiasa an'i Nvidia aho fa raha mandeha tsara amin'ny GNU / LINUX
Fantatro fa tsy izaho irery no mpampiasa faly amin'ny AMD. Tsy manome aho, tsy milalao, fa mampiasa akorandriaka ((manahirana ahy)), mijery horonan-tsary tselatra, sarimihetsika (tsy mihoatra ny 720p) miaraka amin'ny mpamily maimaimpoana.
Mila miteny fotsiny aho hoe: Ho ela velona AMD
Tsy manana olana amin'ilay tompona fananana aho, mandeha tsara ny patch patch catalyst, ny zavatra tokana tsy tadiaviko dia ny fahaizana misafidy tsara ny haingam-pandeha, ny apu sy ilay natokana, zavatra mangalatra bateria kely, saingy tsy izany betsaka, amin'ny fandresena 8 dia tsy afaka ihany koa 🙁
Moraly? Aza mampiasa vokatra AMD ho an'ny sary raha te hankafy ny GNU / Linux ianao, vanim-potoana
Mazava ho azy fa tsia, diso ianao. Manana mpikirakira sy horonan-tsary AMD aho, nampiasa chakra aho ary tonga lafatra ny zava-drehetra ... Mampatahotra ao amin'ny Ubuntu izany.
Tsy misy antony mahatonga ahy manana ny solosaiko miaraka amin'ny chipset Intel 100%.
Ny olana amin'ny intel dia tsy afaka milalao saika na inona na inona ianao ... andao hojerentsika raha manome fanatsarana ny latabatra izy ireo satria mahamenatra fa na ny dota aza dia lasa latsaky ny 20 fps ...
Lohahevitry ny lohahevitra: Ity avatar ity dia mampatsiahy ahy ilay mpampianatra renegon avy amin'ny andiany Daria mihetsika.
Damn, tsy noeritreretiko mihitsy hoe mifanentana (na tsy fitoviana!) Amin'ny AMD dia odyssey toy izany
@ pandev92 Aiza ny fanboyism?
Rahalahy miharihary fa mampiasa apu ianao ny apus mitambatra sary miaraka amin'ny CPU dia tsy ratsy ny apu, saingy fantatsika rehetra fa ny mpamily AMD Linux dia maloto, sady maimaim-poana no tompona.
Ny fitaovako AMD Phenom II X4 965BE 3.4GHZ
Master cooler stock cooler stock miaraka amin'ny fantsom-barahina 2
Mazava ho azy fa saika sahy manome toky aho fa ny solosainao dia mitovy amin'ny Intel core i3 voalohany miaraka amin'ny hatetika tsy mihoatra ny 2GHz
Jereo ity Bechmark ity http://cpuboss.com/cpus/AMD-Phenom-II-X4-965-vs-AMD-A8-5600K
Ahoana no ahitanao ny sakafoko mihinana amin'ny 5600k, aza mody manana zava-bita tsara amin'izany apu izany, miombon-kevitra aminao aho fa tsy miasa sary amin'ny Linux farafaharatsiny ao amin'ny Ubuntu sy NO derivatives aho.
Hita fa nanana pear os 7 aho, napetrako ny mpamily tompony naroson'i Canonical tamin'ny lozisialy ary ny hany azoko dia ny mamaky ireo fonosana, mila mametaka indray aho.
Talohan'izay dia nampiasa Chakra tamin'ny mpamily izay apetrany miaraka amina mpamily, tonga lafatra ny zava-drehetra tsy misy olana ary angamba tsy nitifitra fps maro aho fa tsy dia miraharaha fps firy.
Tsy fanboy an'ny AMD aho fa ampiasaiko fotsiny satria tiako ny lalaovin-dry zareo, fantatrareo fa Nvidia no AMD fa ny CEO Jen-Hsun Huang dia hivarotra nvidia raha toa ka manohy amd izy amin'ny maha CEO an'ny marika azy, intel ary tsy miteny koa aho amin'ny windows dia fako io.
Manaiky, miaiky ary mino aho fa amin'ny CPU Intel dia ny mpanjakan'ny mpanjaka na dia manana 8 cores zanatany sy stock 4.0ghz aza ny AMD raha handresy 32nm izy ireo dia handresy.
Zava-misy iray hafa: Dell, HP, Toshiba ary ireo mpanamboatra hafa dia mahazo fihenam-bidy ho takalon'ny fividianana kely na tsy misy amin'ny AMD, ka nametraka fitoriana momba ny elektronika Integred ilay orinasa.
Heveriko fa mafana ny lohanao, saingy diso aho Stallman. Isaky ny resy lahatra aho fa velona ny RMS tamin'ny taona 1990 fa tsy tamin'ny 2013 dia toa tsy mety ny zava-drehetra,
"Aza mividy ATI, fahavalon'ny fahafahanao izany." Fahavalon'ny baoliko, angamba tsy tiany na inona na inona noho izy, misy ny fahalalahana, saingy noho izy dia ao Linux koa no be mpitia , raha milaza fa tsy mividy AMD izy ireo, dia ho toy ny milaza fa maloto i Ubuntu, satria fotsiny, tsy tiako ny hevitra adalàn'i Canonical hampahafantatra anao amin'ny alàlan'ny fitsinjovana ny tombontsoan'ny vondrom-piarahamonina ary lasa fananana tsy miankina. .
Tsy dia manao ratsy anao aho fa raha te-hamerina ahy ianao na hanao izany dia ataovy, zonao ny maneho ny eritreritrao, manasa anao aho hanadihady alohan'ny hanoratana zavatra tsy dia marina loatra.
Amin'ny ampahany, marina ny azy, satria tamin'ny PRISM, nibebaka izy ireo ary nifanaraka tamin'ny RMS. Raha ny momba ny mpamily dia heveriko fa tsy ny famahan-tena irery no hamahana olana fa tsy hanana izany fahatsapana ho lasibatry ny mpampindram-bola izany.
Marina izany RMS izany, marina izy, saingy matetika, matetika izy dia mifanohitra amin'ny resaka lazainy.
Mampiasa Debian aho ka tsy afaka zatra ny rafitra fonosana diso ao Ubuntu (avy amin'ny Ubuntu, hoy aho fa tsy avy amin'ny derivatives toa an'i Kubuntu na Xubuntu, izay tena tsara), ary mampiasa Flash Player aho hijerena ireo horonantsarako, Skype hahafahako hanao chat video sy Opera hanamboarana ireo ankafiziko finday avo lenta.
Raha ny marina dia manafy ahy ny Ubuntu ary manilika ahy, marefo be izy io, mora kokoa noho ny windows 98 ary mitraka fotsiny ho an'izay. Lazaiko fa voatazona fa ny DEB izay mendrika azy dia Debian sy mint ...
Heveriko fa ny fampiasana zavatra an-trano toy ny etona na codec dia tsy mamadika fahalalahana satria tsy haiko raha afaka mampiasa flash amin'ny trisquel aho fa tsy niova fa ho ahy ny zavatra tsara indrindra dia Chakra, manjaro ary Opensuse,
Raha ny momba ny derivatives an'ny ubuntu dia lazaiko fa TSY manome valiny
Ny Kubuntu sy ny mint dia mitovy amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny Mint izay mifantoka kokoa amin'ireo mpampiasa haino aman-jery misy extra toy ny vlc gimp sy minitube ary ny fitaovan'ny mint toy ny backup backup, mint install mint, sourses sns.
Betsaka ny derivatives an'ny Ubuntu no samy manana ny fiaviany, ny screensaver ary ny programa samihafa amin'ny alàlan'ny apt izay amina distros maro no mampiasa programa mitovy….
Raha tsy nesorina tamin'ny tsirony ny ubuntu dia mety kokoa ny manolotra DVD misy Unity, gnome Xfce, LXDE ary kde saingy niaraka tamin'ny fidiran'ny mir dia nahatonga azy io hanala ny fifamatorana teo amin'ireo tsirony.
Toy izany koa amin'ny mint dia manolotra dvd miaraka amin'ny KDE, CINNAMON, mate ary Xfce
ary mint debian miaraka amin'ny kanelina sy vady, toa ny fanaovan'i Opensuse, izany dia hanamora ny asa ho an'ny programmer sy ny mpampiasa vaovao, amin'izay hisorohana ny fikorontanana sy ny fieritreretana fa ny firaisan-kinan'ny ubuntu sy ny gnone ubuntu dia mitondra rindrambaiko mitovy amin'ny fahasamihafan'ny sary aza. tontolo iainana.
Safidy hafa iray hafa hampiasana Gnome amin'ny XCFE ka raha te hampiasa XFCE ianao dia afaka manova azy amin'ny tsindry na manambatra ny menus sy ny fitaovana ao aminy, raha ny LXDE sy Razor QT dia fampifangaroana ny kaody voarafitra hatrany am-boalohany.
Izany dia hanamora ny tsy fisian'ny fragmentation na ny firaisan-kina ohatra
OS PEAR + OS ELEMENTARY ARY DIPEEN LINUX fa ny telo dia mifantoka amin'ny fakana tahaka ny mac os ary ny 3 rehetra dia manana rindrambaiko manokana tsy miankina amin'ny gnome fa ny pear os sy dipeen kosa dia mampiasa gnome ho fototra. Ankehitriny avy amin'ny Elementary dia tsy haiko raha mampiasa gnome koa izy ho fototra.
Mikasika ny RMS dia tsy tia na inona na inona izy ary ny heviny hoe maimaimpoana izaitsizy dia manakana ny fanomezana safidy tsara kokoa izay mety ho maimaimpoana tanteraka nefa misy kalitao.
Raha ny fahalalako azy dia Gnome dia mamatsy vola an'i redhat ary manana ny fotony gnome, amiko dia toa gnome noheverina ho ampahany amin'ny GNU, fa ny tena mifaninana amin'ny Modern ui na Aqua ho an'ny mac dia mila manala rindrambaiko efa lany andro izy ireo ary manatsara ny asan'ny programa ary koa ny kalitaon'ny sary. Toa tsara tarehy i KDE amiko na dia mihinana sary amin'ny fomba ui sy mac ary ny gnome dia kilometatra ambadiky ny sary sy ny fiasa mankany amin'ny KDE.
Tena diso ianao, ny i3 mihinana ny herin'ny amd cpu, kely fotsiny, fa amin'ny sary kosa dia lavitra dia lavitra, mihaika anao aho hilalao ady 3 amin'ny 1080p miaraka amin'ilay i3 tsy misy sary natokana hafa, fa kosa apu raha azonao atao izany. (mijery gameplays fotsiny amin'ny youtube).
Raha ny tokony ho izy dia tiako ny manamarika fa ny apu dia mitentina 50 euro latsaka noho ny phenom-nao ... ary very kely dia kely ..., tsy hitako io tombony azo antoka io! satria amin'ny phenom dia tsy maintsy mividy sary natokana ianao, mandoa bebe kokoa, ary amin'ny farany dia mila mividy sary koa ianao, ary farafaharatsiny mividy iray amin'ny 70 euro…, dia hanana fps mitovy amin'ny apu ianao.
Tsy voatery mila sary voatokana ianao raha afaka mihazakazaka lalao amin'ny chipseta 4250 na avo lenta miaraka amin'ny 1024mb na mihoatra.
Angamba araka ny nolazaiko fa tsy hadisoana sary izany fa iray fa samy banga avokoa na i Amd na i Nvidia. Ny hany zavatra tsara ao amin'ny linux dia ny intel.
Mikasika izay lazainao, ny apu dia tsara kokoa noho ny intel hd, angamba ilay refesina dia intel HD 5000
Mampiasà mpamily linux maimaim-poana, ireo manana fananana avy amin'ny nvidia sy amd dia tsy misy afa-tsy ny Opensuse sy Chakra….
Mahaliana fa any Ubuntu dia miasa am-pahamendrehana ireo mpamily ATI / AMD, saingy mbola tsy nandramako izany tamin'ny lalao.
Ilay 13.15 sy 13.20 dia toa tsy avy amin'ny zavatra novakiako, indrindra fa amin'ny apus dia miteraka fahakiviana betsaka amin'ny lalao sy ny fivoahan'ny fahatsiarovana! xD
Aleo mampiasa ireo maimaim-poana, miaraka amin'ireo havia 4 maty 2 amin'ny salantsalany rehetra ary misy soatoavina avo lenta, heveriko fa manana 30 fps miorina (1600 x900) aho.
Tsara ny ataoko amin'ny AMD, kubuntu 12.10 miaraka amin'ny mpamily tompony, mijery sarimihetsika aho, milalao amin'ny etona (loharano Counter-strike, ary ny antsasaky ny fiainana 2 maty) ary milamina ny zava-drehetra.
Ny CPU-ko: AMD Phenom II x6 1055t
Toa ireo andiany 7xxx XD ihany no handoka, ao amin'ny mpamily mpamorona kubuntu raha mampiasa openg ho output vlc aho dia manome olana maro amiko, ary ampitain'ny mpampiasa mihoatra ny iray amin'ny phoronix.
Farany mahavita tsara aho ao amin'ny kubuntu 13.10 miaraka amin'ny mpamily maimaim-poana sy ny latabatra farany ..., nahomby tamin'ny flash sy ny horonan-tsary aho, saingy tsy afaka nampihetsika ny uvd ..., tokony ho fantatro ny fomba fanangonana latabatra sy hamoronana manokana deb miaraka amin'ny vdpau dia navadika.
Tsy manana olana aho, mampiasa amd aho ary tena mandaitra, azo antoka fa tsy maintsy ho ireo apu ireo na tonga amin'ny cpu tokana izy ireo izay tsy maintsy maharitra fotoana, raha toa ka tonga toy izao isika dia misy zavatra maro izay tsy mandeha.
Afaka milalao ny antsasaky ny fiainana 2 aho tsy misy olana, trine, bastion na lalao hafa. Amiko manokana dia tsara ho ahy ny tselatra, na 720 na 1080p.
Abigail dia hoy izy:
Mampiasa manjaro aho.
Ary milalao dota 2, fortress an'ny ekipa, cs 1.6 steam aho ary mety amiko io, manana mpamily maimaim-poana aho ary tsy manana olana amin'izy ireo, mbola tsy nahita fahombiazana tamin'ny mpilalao Flash aho ary mijery sarimihetsika manga aho. .
Valiny tamin'i Abigaila
tsy manana chanel roa no ampandehanana. raha te hampavitrika azy dia mila modely ram 2 farafaharatsiny 1866 ary ampiakarinao ao anaty biôs. ary ny mahasamihafa azy dia mampitombo ny fampisehoana mihoatra ny 50%
iray amin'ny tanjak'ireo apu amd ireo ny chanel roa. miaraka amina modely tokana dia tsy mihetsika
tsy ampy ny fampandehanana ny Xboost, mila tena ataonao an-dranomasina ...
Mety ho torolàlana mahafinaritra momba ny fomba fanjonoana apu amd ... misy mahalala ve?
Pandev mijanona amin'ny varavarankely, satria hafahafa na inona na inona miasa ho anao, na amin'ny linux na amin'ny OSx. (aza raisina amin'ny fomba diso eh, sangisangy izany)
Pandev dia azo inoana fa tsy mifanaraka amin'ny UNIX sy ny avy aminy.
Tsy mifanaraka amin'ny mpamily garca eliotime3000 fotsiny aho, mitaky be dia be aho: =) ary indrisy fa ny nvidia ihany no mahafeno ny fepetra takiko.
tsara fa tsy maintsy milaza aho fa farafaharatsiny ho ahy, mahay tsara amin'ireo mpamily tompona orinasa aho, mampiasa a:
Intel (R) Core (TM) CPU i5-3330 @ 3.00GHz (4 cores)
CART VIDEO 1GB PCIE XFX RADEON HD 5640
Ary tsara ho ahy izany, tiako be ny milalao feso feso sy pcsx2 ary saika amin'ny lalao rehetra, na amin'ny wii, gamecube dia mihazakazaka efa ho 100%, ireo eo amin'ny play2 ihany no manana fotoana sarotra, raha tsy izany dia miroso tsara ny firaisankina, na dia tsy Mampiasà betsaka satria tiako ny style klasika ary na dia marina aza dia tsy mandeha toy ny amin'ny windows amin'izao fotoana izao dia mahafeno ny filako izany, amin'ny antsipiriany farany dia mampiasa ubuntu 13.04 aho ary tsy hoe mpankafy ubuntu aho fa ubuntu mbola tsy nandiso ahy toy ny linux mint, fa ny olon-drehetra daholo, Salama
Ary ny lalao etona? maty 4 maty, sam bfe2 matotra? dota 3? sns sns
Eny, ny marina dia tsy nanolotra ny tenako tamin'ny lahasa nametrahana azy ireo tamin'ny alàlan'ny setroka aho satria manana fetra fampidinana ary maro amin'ireo lalao izay lazainao fa mavesatra mihoatra ny 5 gigs, maharitra fotoana fohy fotsiny ny fampidinana tf2 ho an'ny ohatra, avy eo mandra-pahazoako famantarana tsara kokoa alefako, Regards
Manamboara vondrona manampy vonjy, ATI, raha tsy AMD / ATI izy ireo, ka mividy AMD / ATI dia tsy haiko na masochist izy ireo na inona.
Tsotra be satria rehefa mandeha milalao amin'ny windows ianao dia mampitaha ny ati-nao amin'ny nvidia mitovy vidiny .., very foana i nvidia
gekko dia hoy izy:
Zavatra hafahafa, mihazakazaka LMDE amin'ny kanelina sy C-50 APU aho ary tsy mitatitra olana amin'ny flash araka ny voalaza etsy ambony. Tsy azoko ny mety hitrangan'izany amin'ny olona. u_u
Valio i gekko
Hatramin'ny nividianako mini lap miaraka amd e-300 dual core ao amin'ny 1.1ghz dia diso fanantenana be aho tamin'ny amd. Tena tsara ny solosaina finday, ny fitendry, ny efijery, ny loko sns ... na izany aza, niadana ny mpanera ary nafana be na dia teo am-baravarankely aza ... tao Ubuntu dia nipoitra (tsy mazava ho azy ara-bakiteny). Ankehitriny dia miaraka amin'ny taranaka voalohany intel core i3 (380m) aho ary ubuntu 13.04 dia mandeha tsara amin'ny Unity.
Mikiakiaha amiko raha tianao ...
Ny Xorg-Edgers Catalysts dia niasa ho ahy tamin'ny HP Envy M6 (APU A10-4600M), na dia lazaiko aminao aza fa raha ny voa tsara amin'ny rambony no mahatonga azy io ho funkar, indrindra fa ireo Catalistes izay nentin'i Kubuntu "tamin'ny alàlan'ny default. "12.10 TSY MIASA AMIN'NY XORG 1.13 PUÑETERO IZY !!! Taorian'ny alina nahaterahako dia afaka nilalao tamin'ny alàlan'ny divay mihitsy aza aho ((mbola nanandrana ny L4D2 sy ny Program Kerbal Space amin'ny zanatany aho). Na izany aza, tsy dia mampiasa Linux be loatra aho eo am-pelatanako, noho ny remix izay natambatro (Ubuntu 12.10 hatramin'ny 13.04 miaraka amin'ny KDE sy Unity ... tsy mifanaraka izy ireo ary kamo aho manavao ny hunk manontolo 😛)
Ankehitriny rehefa mikasa ny hanao Winbugs 8 hitsambikina amin'ny «Velikaya Slava» aho (araka ny iantsoana ny lapako), andao hojerentsika ny fandehany ... Ny fahafantarana fa Kubuntu 12.04.3 dia saika navotsotra (ary ny AMD manohana 12.04.2 sy 13.04, izay azoko antoka fa hijanonako mandritra ny fotoana fohy), hahaliana ny mampitaha ny fampisehoana eo anelanelan'izany sy ny Fedora 19 amin'ny Catalyst 13.8 ... Manantena aho fa hamorona izy ireo ary tsy hahazoako "voahitsakitsaka ny lamba (et) a hatramin'ny fahafatesana. "
Etsy ankilany: mpamily maimaimpoana + APU = ataovy ao anaty etona ny testicle. Manantena aho fa afaka manatsara ireo lafiny ireo izy ireo atsy ho atsy, satria tiako be ny AMD noho ny tahan'ny vidiny / tombony.
Ny olana anananao dia ny Ubuntu, fa tsy ny micro, ny mpamily, na ny sary. Manana milina taloha aho, miaraka amina AMD Sempron 3400+, RAM 2 GB, ary monitor LCD 21 'izay ahafahako mijery sarimihetsika, fahitalavitra, izay horonan-tsary na dia amin'ny efijery feno aza.
Ny karatra sary dia Nvidia Geoforce (256K) taona lava-bato, ary tsy ampiasaiko amin'ny mpamily tompony fa amin'ireo maimaim-poana miaraka amin'ny rafitra (Nouveau).
Ny rafitra dia Linux Mint Debian Edition (LMDE), izay miaraka amin'ny kernel 3.2.0.4.
Miaraka tanteraka amin'izay. Tsy haiko ny lalao, satria tsy ampiasaiko; fa amin'ny vidéo, tsy misy olana. Manantena aho fa afaka manampy anao io. Miarahaba.
Ny olana dia ... fa tsy miresaka momba ny processeur akory izy ireo ... fa momba ny APU kosa. Manana Athlon 64 sy Phenom X4 aho izay nihazakazaka linux toy ny landy ... ny olana dia raha manana karatra horonantsary AMD ianao. Nahavita nanao lalao toa an'i CoD-MWX aho (miaraka amin'ny X anelanelan'ny 1 sy 2), ny Doom 3, ny tsara indrindra amin'ny Need for Speed ​​saga ary nametraka an'i Kerbal sy L4D2 ho an'ny tanindrazana aho nefa tsy nisy ady (avy amin'ny mpamily) tao «Velikaya Slava »(My HP Envy M6 APU AMD A10-4600M). Fa mba hialana amin'ilay "Velikaya Slava" (Voninahitra lehibe amin'ny teny rosiana) dia voatery niteraka sinoa niaraka tamin'ny elo malalaka aho !!!
Nanana olana nitovy tamin'izany aho ary ny tsara indrindra vitako dia ny niaraka tamin'ny rafitra RPM, i Deb jerks rehefa milalao horonantsary ary koa ny RPM, saingy ny olana dia kely kokoa saingy afaka niaina niaraka tamin'io aho, ny safidy hafa dia ny baoty roa miaraka amin'ny rafitra. Ireo varavarankely, niankina tamin'ny PCLinux aho ary tao amin'ny solosaina matanjaka niaraka tamin'ny PCLinux FullMonty mazava ho azy fa mbola misy maromaro ao, manana ny Fedora, Opensuse, sns. Ny olana dia tsy ny AMD ihany, fa ny olana voalohany dia niseho tamin'ny solosaina Intel taloha. miaraka amin'ny horonan-tsary tafiditra tokony ho 4 taona lasa izay ary nanandramana rafitra 10 momba ny ubuntu…. na ny crunchbang sy ny alika kely aza dia mbola tsy nanandrana rafitra BSD mihitsy aho, raha nisy olona niaina BSD + AMD, azafady maneho hevitra ... miarahaba ny rehetra ...
Mamaly an'i jesuse
Paolo dia hoy izy:
Aza mampiasa linux intsony .... te hanasarotra ny fiainanao ianao.
Valiny tamin'i Paolo
Mifosa dia hoy izy:
Ankoatry ny lazainao, izay tsy laviko dia marina, mila maika hiverina any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ianao hianatra ny Espaniola izay tsy nianaranao mihitsy tamin'ny fotoana tokony nanananao, eh, zazalahy? Betsaka ny teny sy daka amin'ny rakibolana amin'ny andalana vitsivitsy! Ry zazalahy, mieritrereta fa olona an-jatony na an'arivony no hamaky anao, ahoana ny fahitanao azy fa tsy mahay mamaky teny sy manoratra, rangahy?
Valiny ho an'i Chisgarabís
Misaotra, amin'ny fanamarihanao dia manadio ny borikiko aho. 😛 ary faharoa, nihalehibe niteny italianina aho, noho izany, hajaina aho rehefa manoratra espaniola. Ala, zaza matory.
Sbroker dia hoy izy:
Ny olanao dia tsy mampiasa debian ianao (ubuntu, kubuntu, mint, sns .. samy debian daholo fa tsy debian). Ny rindranasa rehetra, ny fampiasa ary ny plug-in ary ny fampiharana izay nolazainao dia ampiasaiko amin'ny Phenom II 955 X4 BE + ASUS ATI HD 5670 1 G DDR5 ary ny zavatra rehetra dia miasa toa ny landy. Andramo miaraka amin'ny seranam-piaramanidina debian 7.6 ary mety ho gaga ianao.
Valiny amin'i Sbroker
Aza mino fa miasa tsara be i Ati ao amin'ny Windows, manana AMD Athlon 64 3500+ miaraka amin'ny ram 2GB aho, ary ati X300 pci express ary ao amin'ny windows 7, hanadala ahy ny clan tv, ary somary miadana ny rafitra indraindray. , ao amin'ny GNU / Linux dia tsy milaza zavatra aminao aho, ny AMD dia fako madio, miaraka amin'ny intel core 2 duo ao amin'ny macbook-ko ireo zavatra ireo dia tsy nitranga.
Famafana ny fako amin'i Shred